5 Tiyaatar caanka In Europe | Save A Tareen Travel Europe
Tiyaatar caanka ah ee Europe waxaa leh tolmo wanaagsan galay dhar dhaqanka Yurub. tiyaatarada caanka ah ee Europe idiin Yaboohi qaab aan caadi ahayn. Waxay kaa tegi doonaan adigoo kiciyey, dhaqaaqay, iyo higgaadinta! dabiiciga ah ee fanka waa soo Dagdagaysa iyo hal-abuur dushaan ka jirto. widhwidha Kuwani ciyaaray ku nool yihiin oo kaliya in xusuus our. tiyaatarada caanka ah ee Europe abuuro dareen gaar iyo failed. Waa daqiiqad kooban in la wadaago waqti, iyo waxaad u baahan doontaa in bask iftiinka ay siyasad.
Inta badan oo ka mid ah kuwii gabayaaga weyn ee la soo dhaafay, ka badan laba boqol oo sannadood ee la soo dhaafay, halkan sameeyaa. operas badan oo caan ah ayaa ay wax soo saarka ugu horeysay halkan sida Othello, Nabucco by Verdi, iyo Madame Balanbaalis Giacomo Puccini.
Tiyaatarka Globe ayaa waxaa loo yaqaan Shakespeare Globe. Taageerayaasha kacsi of Bard waa booqo tiyaatarka caan this ee Europe. shuqullada William Shakespeare ee muujiyaan faham qoto dheer ee dabeecadda aadanaha. Uu jiidanayaa shaqada dhageystayaasha. Uu xad sare oo ah luqadda Ingiriisiga ayaa ruwaayado iyo gabayo Xisbiyada Mucaaradku gogo 'oo hanad.
Paradis Latin waa casrigan soo socda cabaret taasi waa dhaxal sugaha tiyaatarka asalka ah ee Latinka. Tiyaatarka Latin ayaa waxaa asal u wakiishay by kale oo aan ahayn Napoleon Bonaparte ee 1800 ma jiro.
Volkstheater ee Vienna waa a hortiisa qurux badan si ay bal eeg. Waxa marka hore la furay 1889. Waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn noociisa adduunka oo dhan waddamada ku hadla Jarmalka waana waa in la arkaa.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Tiyaatar caanka In Europe” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https:// www.saveatrain.com/blog/famous-theatres-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#tiyaatarka ParadisLatin fanaaniinta Teatro alla Scala tiyaatarka TheGlobeTheatre tareen safarka Volkstheater